N'afọ nke asaa - 1aviagem.com
Edebere 18 August 2019 site Römulo Lucena
Gini ga agwa gi na n’onwe anyi (mmadu) uwa enwetaala uzo nke asaa?
Ee, ozi ọma ahụ dị mma, mana ọ dị mwute ikwu na ọ bụghị.
N'ihi mkpokọ nke ekpokọtara n'oké osimiri ebili mmiri a na-ebubata ma na-ejikọ ọnụ na Oke Osimiri Pasifik n'etiti California na Hawaii, ụfọdụ ndị Oceanogragrama kwupụtara ya dị ka kọntinenti nke asaa. Nke a ga-abụ ebe mkpofu anyị na-atụfu, nke a na-ejikarị plastik. Emere ka ọ dị ihe dịka 79 puku tọn na 94% jiri plastik ma ọ bụ micro plastic. Ghọta micro-plastic mpempe rọba pere mpe nke na o siri ike wepu oke osimiri. Anyị na-ekwu maka iberibe mkpuchi, ite, na ihe ndị ọzọ na-agbaji, site na ebili mmiri, ma ọ bụ ugbu a nke oké osimiri, ma ọ bụ n'oge nrụrụ ogbo dị ebe dị nso na milimita 5. Ihe dị ka eserese a.
(Foto sitere na Florida Sea Grant)
Ihe a na-ese n’elu osimiri wee chikọta ọnụ ruo mgbe ọ mepụtara ihe ụfọdụ ndị ọrụ nyocha kpọrọ "kọntinenti ọhụrụ." Nke ahụ bụ eziokwu, kọntinent rọba. Nke ahụ bụ ihe m na-akpọ kọntinenti asaa. ” Yabụ taa e wezụga: Africa, America, Antarctica, Eshia, Europe na Oceania, anyị nwekwara Plastic!
Kedu ụdị kọntinenti ọhụrụ?
Isi ihe achọtara ga-ejikọta eri naịlọn, na-esite na azụ na uwe, nke emesoro sonyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Akụrụngwa gụnyere dịka ọmụmaatụ karama ụdị dị iche iche, site na anụ anụ na karama iko, iko, ite dịgasị iche iche na ihe mkpuchi. Ha ga-agbakọta tinye uche na Oke Osimiri Pasifik. N'agbata United States (California) na Hawaii
Ọ dị mma, ị hụla ụfọdụ foto ndụ mmiri nke rọba ahụ mebiri ma ọ bụ mebie ya. Tbe ahụ na-anwụ maka ndagide mmiri dị ndụ jiri akpa rọba na-eri nri ma na-anwụ n'ihi na ha enweghị ike iwepu plastik ahụ, ọ na-egbukwa nduru ahụ. Ee, ọ dị nwute na nke a mere.
Ma tupu ị chee na nduru bụ ihe nzuzu zuru ezu iji gbaghaa plastik na mmiri dị ndụ, nwalee ya n'onwe gị. hụ mmiri dị ndụ, nke mmiri dị n'oké osimiri, nke nwere mmiri igwe ojii ma na-egbochi ọhụhụ, ma hụ mmiri dị ndụ, ma ọ bụ nke bekee n'okpuru otu ọnọdụ. Ọ bụ ma ọ bụrụ na inwere ike ịhụ ihe dị iche?
Onwere ndi mmadu amaghi otu esi amata nkpuru akpukpo ahiri di nma na nkpuru nkpuru.
(Ya mere, n'ime foto abụọ a dị n'elu bụ mkpụrụ plastic na nke bụ mkpụrụ dị mma?) Hapụ ya na nkwupụta (foto 1 ma ọ bụ foto 2).
Ugbu a, ị ghọtara na nduru abụghị ihe nzuzu ahụ?
Ọ dị mma, kpọọ ya agwaetiti plastik ma ọ bụ kọntinenti nke asaa eziokwu ahụ bụ na nsogbu ahụ dị ma chọọ ka edozi ya. E kwuwerị, ọ bụrụ na ụmụ anụmanụ na-eri nri na plastik, ọ dịghịkwa emebi usoro ụkọ nri, maa ebe ọ ga-elekwasị anya? n’ime gị ma ọ bụ n’afọ m. Ka emechara anyị bụ isi nri nri. Anyị na-erikwa anụ ụlọ, tinyere anụ ndị dị ka mmiri.
Olee oke nsogbu ahụ?
Nchọpụta ọhụụ na-egosi na ihe akpọrọ “kọntinenti nke asaa” ga-abụrịrị okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ nke France, ma ọ bụ steeti Minas Gerais (maka ndị enyi Brazil m). Ihe dị gburugburu square kilomita 1,6, ọ na-anọgide na-eto.
Aha gọọmentị maka platy plastik a: Nnukwu ofkụ nke ahihia Pacific.
Kedu ihe siri ike ịchọpụta n'ihi micro plastic (5 mm echeta?)
Yabụ ọ bụrụ ngbgharịgharị, tụba karama mmiri gị na ihe plastik ndị ọzọ n’ebe kwesịrị ekwesị ọ bụghị n'ụsọ osimiri, ma ọ bụ opekempe nye ya ebe kwesịrị ekwesị. Ime nke a ga - enyere ịchebe ndụ mmiri.
Cheta okwu Joana Bicalho:
“You naghị egwu egwu n'èzí, naanị ị ga-egwu n'ime!”
Ọ bụ ihe m hụrụ n'anya, ị naghị egwu egwu n'èzí (mbara ala) ị na-egwu naanị n'ime.
Dịka ekele, ahapụrụ m nduru maka ịmara nke gị. Ọ na-ekele gị maka mmegharị gị ka ị ghara ịtụfu (ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ị ga - ejedebe n'oké osimiri) rọba, kama iji jigharịa, tụgharịa ma ọ bụ ụgbọ mmiri gaa ebe ị na-aga.
Urtgba Ogba Mbara Igwe na Malaysia.
Ọ dị mma, na ọkwa na-esote m ga-ekwu maka kọntinenti nke asatọ, ọ dịkwa gị nso karịa ka ị chere!
Iji mụtakwuo maka nlele mmiri:
https://1aviagem.com/e-sobre-malasia-kedụ ihe anyị ga-ekwu /
Chọọ maka akụkụ oke osimiri.
Iji gụkwuo banyere ya, Ahapụrụ m njikọ abụọ:
1- site na National Geografic
https://www.nationalgeographic.com/news/2018 / 03 / akwa-pacific-ahihia-patch-plastik-gburugburu / #nso
2- si na Daily Telegraph.
https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/nolile-osimiri - ugwu-osimiriọgbakọakpa mkpuchi mmachi akpaakụkọ akụkọ /5dcabe2f20d33b1e1104dea4a080daea
A mmachi na ruo mgbe ọzọ post.